Ikhaya leHolide le-Heritage Coast elinombono omuhle wolwandle - I-Airbnb
Ikhaya leHolide le-Heritage Coast elinombono omuhle wolwandle
Ogmore-by-Sea, Wales, i-United Kingdom
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ian
Ikhaya lethu lamaholide elihle elinokubukwa okuvelele kolwandle elibekwe ogwini lwamaGugu Amahle manje selikulungele ukuthi ulijabulele! Zilungiselele ukuthi uphefumulelwe njalo uma ungena endaweni yokugcinwa kwezilwane nokubukwa okumangalisayo kuwo wonke isiteshi, ikakhulukazi njengoba ilanga lishona phezu kwamanzi. Isanda kuhlotshiswa inamakamelo okulala ama-3; inkosi inombhede wenkosi kanye ne-ensuite, igumbi lesibili lokulala nalo linombhede we-Kingsize.
Indlu iqokwe ngempahla yekhwalithi ephezulu kuyo yonke indawo futhi ikhululekile kakhulu. Igumbi lokuphumula (igumbi le-TV) line-TV enhle kanye nosofa abathokomele ukuze uphumule ngemva kokushaywa umoya wasolwandle. Pheka ekhishini lethu lesimanje futhi ujabulele ukudla kwakho okubheke olwandle ngeminyango yevulandi. Ngenkathi ungekho kusihlwa endaweni yethu ye-conservatory futhi ubukele ukushona kwelanga okuhle kakhulu ngokuthula nokuthula.
Ungakhohlwa amabhuzu akho okugibela izintaba ukuze ujabulele ukuhamba okumnandi endleleni yogu lwamagugu, noma ulethe amabhayisikili akho futhi ujabulele indawo emangalisayo.
Indlu iwuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka emabhishi nasemathekwini ase-Ogmore by Sea, inezindawo zokupaka ezi-2 ezingekho emgwaqeni kanye neshede elivikelekile lokukhiya amabhayisikili noma amabhodi okubhukuda.
Hlola ezinye izinketho ezise- Ogmore-by-Sea namaphethelo